အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, တီဗီ & ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ: NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - - စာမျက်နှာ 32 2019 NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ။ Show ကို 2019 NAB ။
အဆိုပါ 4K 4Chariy ပျော်စရာ Run ကိုအများဆုံး "ဟုရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထား" ကွန်ယက်အကြို၏တဦးတည်းဖြစ်လာနေသည် ...
သင်တို့သည်ဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် sensin Self-ကားမောင်းကားတွေ, စက်ရုပ်ကားများ, ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်မောင်း-လျော့နည်းကားများကသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းရှိမရှိ ...
ဒါကြောင့်သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးများ၏ကြီးထွားလာရာထူး join ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အတော်များများကလေယာဉ်မှူးလျှော့မတွက် ...
Jampro အင်တင်နာ: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @JamproAntennas
Jampro antenna Inc ကိုထဲမှာရှိသမျှ application များအတွက်အင်တင်နာ, ပေါင်းစပ် & filter များနှင့် RF အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်
DPA မိုက်ခရိုဖုန်း: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @DPAmicrophones
အံ့သြဖွယ်အသံနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းဒီဇိုင်း, ခြွင်းချက်ကိုက်ညီမှုများနှင့်ထူးချွန်ကြာရှည်ခံမှုအဘယ်သူမျှမလှယျကူသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းထက်ပိုမိုအပေါ်ဆွဲယူလာသည်
Clear ကို-Com: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @clearcomsystem
Clear ကို-Com ရဲ့ဘော့ Boster အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်သို့ဦးဆောင်သည်သူ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုဝေမျှပေးသည်။ Bob ကလည်းသူတို့ရဲ့မကြာသေးမီအခမ်းအနားအကြောင်းကိုပြောသွား
Archiware: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @archiware
Archiware စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-to-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက် Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း, ဆန်းသစ်အကျိုးရှိစွာနှင့်ပြည့်စုံအာရုံစိုက်။ အဆိုပါ P5 ဆော့ဝဲ Suite များအတွက်သိမ်းဆည်း, backup လုပ်ထားနှင့်ထပ်တူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
RUSHWORKS: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @RUSHWORKS101
RUSHWORKS Rush Beesley အစောပိုင်း 2001s ကတည်းကနည်းပညာရှေ့ဆောင်ခြင်းဖြင့် 1970 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်တစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးမှ
ထုတ်လွှင့်လူကန်း Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow
အလင်းရောင်ဒါရိုက်တာများနှင့်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာများ, သင်ကမှောင်မိုက်တွင် ... အားလုံးတစ်ဦးစတူဒီယို၌ပြတင်းပေါက်အတူပါလာသောစိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကိုငါသိ၏
Frame.io: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @Frame_io
crystal: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow @connect2crystal
crystal အဆုံးမှအဆုံးသို့ထုတ်လွှင့်စစ်ဆင်ရေး၏စောင့်ကြည့်ခြင်း, ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် metadata စီမံခန့်ခွဲမှုအလိုအလျောက်ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုထောက်ပံ့ပေး - အသွားအလာ, အချိန်ဇယားဆွဲထဲကနေ
Cinegy: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow
Cinegy မီဒီယာနှင့်ရုပ်သံလွှင့် software နှင့်နည်းပညာများ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်အာရုံစိုက်။ Cinegy လုပ်ငန်းအသွားအလာဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်
ပါဝါ၏တာဝါတိုင်: Litepanels '' ရေခဲပြင်ပေါ်တွင်ကနေသည် '' Gemini အလင်းများကြယ် Up ကို ITV ၏စီးရီး Hit ''
Los Angeles - လက်ရှိ ITV အပေါ် 20th စီးရီးတင်ဆက် Litepanels '' Gemini 2019 ×2ဖျ LED panel က "ရေခဲပြင်ပေါ်တွင်ကနေသည်" ဟုဗြိတိန်ရဲ့နာမည်ကျော်များ၏နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ် (Doi) အစီအစဉ် - ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 11 ။ နောက်ဆုံးပေါ်စီးရီးများအတွက်ပြပွဲရဲ့ထုတ်လုပ်သူများအနေနဲ့ဆန်းသစ်အသစ်ကအလင်းရောင်မဟာဗျူဟာလှည့် - 40 Gemini ပြား on-set ရေခဲကိတ်ကွင်းပတ်ပတ်လည်ငါးတာဝါတိုင်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားသည်။ Doi နာမည်ကြီးတွေ features နှင့်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ဖက်အနေနဲ့ All-ကြယ်တို့ကိုစီရင်ခြင်း panel ကများ၏ရှေ့မှောက်၌ယှဉ်ပြိုင်စကိတ်စီးတွက်ဆ။ အဆိုပါ 11th စီးရီးသရုပ်ဆောင်များကိုနှင့်အဖြစ်မှန်တီဗီကြယ်များထံမှဂီတသမားများနှင့်အားကစားသမားများအထိပြိုင်ပွဲဝင်နှင့်အတူအစောပိုင်းဇန်နဝါရီလပြသဖို့။ တစ်ဦးနှင့်အတူထိန်းချုပ်ထား ...
အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာ InSync နည်းပညာ
တစ်ဦးကအထူးကုရွေ့လျားမှုအတွက်လျော်ကြေးငွေဘောင်နှုန်းကိုပြောင်းလဲခြင်း, InSync နည်းပညာက၎င်း၏ FrameFormer software ကိုကနေရရှိနိုင်တဲ့သာလွန်အရည်အသွေးပြောင်းလဲခြင်းကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ FrameFormer ထိုကဲ့သို့သောအသစ်သောစီမံကိန်းများအတွက်ပစ္စည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ် repurposing ၌ရှိသကဲ့သို့အကြောင်းအရာပိုင်ဆိုင်မှု application တစ်ခုလိုအပ်ပုံစံသို့မဟုတ်ဘောင်နှုန်းသည်၌နေကြသည်မဟုတ်ဘယ်မှာအခြေအနေများများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာ, InSync MacOS အဘို့ကို Adobe Premiere Pro ကိုများအတွက်အသစ်များကို FrameFormer plug-in ကို၏ရရှိမှုကိုကြေညာပါလိမ့်မယ်။ အကွာအဝေးအားဤထို့အပြင် FrameFormer စေလွှတ်များအတွက်ထပ်မံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နဲ့ options ပေးပါသည်။ နည်းပညာသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးချင်သောသူတို့အဘို့, InSync နှစ်ခုစာတမ်းများကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် ...
အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာက Black Box ကို
အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာ, က Black Box က၎င်း၏က high-performance ကိုမြ™စုစည်း KVM (ကီးဘုတ်, မောက်စ်, ဗီဒီယို) အစုစုကိုဖြတ်ပြီးထုတ်ကုန်တခုအဖြစ်မည်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ remote desktop ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ရန်အတွက် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နိုင်ပါတယ်အသစ်တစ်ခုပူဇော်သက္ကာကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Black Box တဲ, SL12716, မြ KVM မျိုးစုံတည်နေရာကနေအများအပြားကွန်ပျူတာများမှအဆင်ပြေပြေနဲ့အလိုလိုသိ Real-time access ကိုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်, အခန်းပေါင်းကိုဖြတ်ပြီး, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, က်ဘ်ဆိုက်များရှိမရှိ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မြို့ကြီးများမှဆက်ကပ်အပ်နှံသရုပ်ပြဒေသများ feature ပါလိမ့်မယ်။ Black က Box ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏တိုင်းဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့အတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်ဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်, နှင့် 2019 NAB Show မှာကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်များကပြည့်စုံကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် ...
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းအတွက်Emmy®ဆုရရှေ့ဆောင်တစ်ဦးကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်အသစ်တစ်ခု cloud-based service ကို, FileCatalyst Spaces အဖြစ်သူတို့ရဲ့အစာရှောင်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်မှ updates များကိုစတင်ပါလိမ့်မည် အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာအတွင်းဧပြီ 2019-6 မှ NAB 11 မှာ suite ကို။ FileCatalyst Booth SL12116 တည်ရှိသောမည်ဖြစ်ပြီးလူသိရှင်ကြား FileCatalyst Spaces သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး cloud-based ဖိုင်လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှုစတင်။ FileCatalyst Spaces ကုမ္ပဏီများသည်အပြည့်အဝလိုင်းမှာဖိုင်တွေမျှဝေဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တည်ခင်းဧည် service ကရှေ့ပြေး software ကိုပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏မူပိုင်ခွင့်အစာရှောင်ဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းပညာသုံးပြီးအမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် ...
TVU ကွန်ယက်မီဒီယာ Supply Chain ပလက်ဖောင်းမှအပ်ဒိတ်များမိတ်ဆက်ဖို့
တိုက်ရိုက်လွှ IP ကိုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ TVU ကွန်ယက်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်, ဧပြီအတွင်းနှစ်စဉ် NAB Show မှာကုမ္ပဏီရဲ့တဲအတွက် TVU MediaMind ၎င်း၏မီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပလက်ဖောင်းများအတွက် (#C1707) ကနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန် updates များကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ အလိုအလျောက်, AI အ, streaming, 4K နှင့် 5G များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ထောက်ခံမှုထည့်သွင်းစဉ် TVU MediaMind ရဲ့ဇာတ်လမ်းဗဟိုပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာချဉ်းကပ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးရိုးရှင်းစွာ။ များစွာကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများမီဒီယာအကြောင်းအရာကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ယနေ့စားသုံးနေသည်နှင့်အတူ "ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိတော့မယ့်တီဗီများအတွက်မီဒီယာ, ဆည်းပူးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်သည်။ တကယ်တော့, အစီအစဉ်များကိုဖန်တီးနေသောလမ်းကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်ရပါမယ် "ဟုရှင်ပေါလု Shen, ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ကို Creative စတူဒီယို Leroy & သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ပြီးတော့ခန္ဓာဗေဒပေါင်းစည်းမှု; ရွှေ့ Clients တွေအနေနဲ့ 360 အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုကို Creative အရင်းအမြစ်ကမ်းလှမ်း
New York, NY - clients များဖန်တီးမှုမဟာဗျူဟာ, ထုတ်လုပ်ခြင်း, 2D / 3D ကာတွန်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုသည်အမြင်အာရုံအလတ်စားများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုလွှမ်းခြုံဖန်တီးမှုန်ဆောင်မှုများပိုမိုနက်ရှိုင်း palette ပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့အပြောင်းအရွေ့များတွင်ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီများ Leroy & သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်နှင့်ခန္ဓာဗေဒတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပါပွီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို Creative Officer အဖြစ် Leroy & သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်မှ (ညာအထက်ပုံ) ဖန်တီးမှု, Mark ချစ်သူများနေ့ပူခန္ဓာဗေဒတည်ထောင်သူနှင့်လေးစားဖွယ်ကွန်ယက်ကိုဆောင်တတ်၏။ ချစ်သူများနေ့ 2014 ကတည်းကဆုရဖန်တီးမှုစတူဒီယိုကိုဦးဆောင်ခဲ့သူကိတ်ထူထပ် (လက်ဝဲအထက်ပုံ), ပိုင်ရှင် / အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူများနေ့သူကွန်ယက်ရဲ့ထူထောင်ဘယ်မှာ CNBC မှာအစောပိုင်း 1990s ၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင် ...
တရုတ်ဆုပေးပွဲစမတ်ဖုန်း-အခြေခံပြီးတီဗီထုတ်လုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်ဗီဒီယို Call Center Key ကိုမူပိုင်ခွင့်
ကြီးထွားလာရုပ်မြင်သံကြားအပိုင်း Palisades အတွက် VCC ရဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမူပိုင်ခွင့် Portfolio Enhancer ခေါင်းဆောင်မှု၏ချဲ့ထွင်မှု, နယူးယော့ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 2019 - အဆိုပါဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုစင်တာ (VCC), ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးတီထွင်ပေးသူ, ကမူပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုထားပြီးကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာ #ZL 201380050976.3 ။ အဆိုပါ VCC ရဲ့မူပိုင်အစုစု၏ဤသိသာတိုးချဲ့ဒါကပထမဦးဆုံးတရုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချစဉ်ဝေးလံခေါင်သီလွှမ်းခြုံမြှင့်တင်ရန်စမတ်ဖုန်း၏ကမ္ဘာ့ဘီလီယံမူတည်ပြီးမှဖြစ်နိုင်စေသည်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုကိုခေါ်ဆိုသူ၏-based ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု၏လယ်ပြင်ထဲမှာကုမ္ပဏီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုထင်ဟပ် မူပိုင်မျိုးစုံမူပိုင်ခွင့်အောက်ပါအတိုင်း ...
မှာ-မူလစာမျက်နှာပူဇော်သက္ကာနှင့် 2019 NAB Show မှာကမ်းလှမ်းအီလက်ထရောနစ်အားကစားဝန်ဆောင်မှု Enhanced ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Delivery Service ကို, မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပြောင်းလဲမည်
Las Vegas - ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 2019 - အSwitch®, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဘဏ်ဍာပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲ, ပုဂ္ဂလိကသည်မိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သည် 2019 NAB မှာမီဒီယာများ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောရှုခင်းကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းက၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဟာယပူဇော်သက္ကာပြပါလိမ့်မည် Las Vegas မှ (Booth SU3714 သို့မဟုတ် N1921) တွင်ပြသပါ။ ဤရွေ့ကားဆန်းသစ်အသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုအဆိုပါပြောင်းလဲမည်ကိုအလွန်ပစ်မှတ်ထားဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏စုစည်းရိုးရှင်းစွာအရာဒစ်ဂျစ်တယ် Connect ကို™နှင့် over-the-ထိပ်တန်းအဖြစ်ကောင်းစွာ, အဆိုပါပြောင်းလဲမည်အီလက်ထရောနစ်အားကစား™, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဂိမ်းကစားဖြစ်ရပ်များရန် Switch ၏ cloud ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဂီယာကိုတိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှု feeds များပါဝင်သည် တစ်ဦးကိုအလွန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖြစ် ...
Kinotehnik Practilite မင်္ဂလာဆောင်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ, 7th ကြမ်းပြင်မီဒီယာများအတွက်လမ်းထွန်း
Philadelphia တွင် မှစ. Toledo ရန်, မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်စတိဗ် Staffan, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်-based 7th ကြမ်းပြင်မီဒီယာများ၏ပိုင်ရှင်နှင့်အော်ပရေတာ, စုံတွဲများလွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်ကသူတို့ရဲ့အစဉ်အမြဲအချိန်လေးကိုဖမ်းယူကူညီပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုများအတွက် '' အဆိုပါထုံးရဲ့ 2019 ရွေး '' အဖြစ်, Staffan ကသူ့ရုပ်ရှင်မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုများ၏အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုတညျဆောကျခဲ့သညျ။ 7th ကြမ်းပြင်မီဒီယာရဲ့ 2018 မင်္ဂလာဆောင် Reel - Vimeo အပေါ် 4th ကြမ်းပြင်မီဒီယာကနေ 7K ။ "မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုအလွန်ယှဉ်ပြိုင်ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့လမ်းအတွက်အတူတူရိုက်ချက်များရိုက်ကူးအဆင်ပြေရရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ငါကွဲပြားခြားနားသောတစ်ခုခုလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ သင်တန်း၏, အချို့ရှိပါတယ် ...
32 ၏စာမျက်နှာ 911«ပထမဦးစွာ...1020«3031323334»405060...နောက်ဆုံး»
အပိုဒ်မော်ကွန်း လကိုရွေးချယ်ပါ ဧပြီလ 2019 (417) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
နွေရာသီ 2019 Internship
ကိုး စား. နွေရာသီဝင်ရောက်ပြီး * မရတဲ့ * (ဇွန်လ - သြဂုတ်လ 2019)
သေနတ်သမား / Editor ကိုနယူးယော့ Knicks